Markii daah furnaanku noqdo maal - TELES RELAY
Markuu daah furnaan noqdo hanti
By TELES RELAY On Agoosto 10, 2020
Markaan gelayno qeybta labaad ee seddexdan seddexaad ee 2020, adduunka shaqadu weligiis ma helin mowjad naxdin leh, oo tirtiraysa dhammaan saadaasha sanadka ugu madow adduunka dhaqaalaha. Inta udhaxeysa dhibaatada dhaqaale iyo dhibaatada caafimaad, shirkadaha badankood waxay dib u eegeen hababkooda maamul iyagoo wajahaya suuq aad u kacsan. Waxay ku jirtaa jawigan in dhalinyarada qalin jabisay ama dib u tababbarida shaqo doonka ah ay muujiyaan xariifnimo si ay u soo jiitaan dareenka shaqaaleeyaha qaata CV-yada ka badan intii caadiga ahayd. Sidee loo istaagaa loona dhiirrigeliyaa intaas yar ee dheeriga ah ee farqiga samayn doonta?
Warqadda ku qor fiitamiinnada
In ka badan jimicsi caadi ah, warqaddaada daboolka ahi waa barta ugu horreysa ee xiriirka ka dhexeeya shirkadda iyo shaqo-doonka. Waxay siinaysaa xoog wax kasta oo CV-gaaga uusan tarjumi karin wixii ka dambeeya xirfadaada ama cilmigaaga. Waxay hubinaysaa meelayntaada, waxay tarjumaysaa qiimayaasha uu had iyo jeer dalbado shaqaale qorista xog ogaal ah. Qaabeynteedu waxay u baahan tahay asal gaar ah taas oo kaa dhigi doonta mid kuu gaar ah astaanta ugu habboon booska. Maaha su'aal kaliya in laga hadlo fahamkaaga suuqa ay shirkaddu bartilmaameedsatay ka shaqeyso, laakiin wax badan oo ka badan: wadaagista aragtideeda, fahamkeeda DNA.
Sidee looga saaraa qufulka la iloobay ee dharka saaran? - CAAFIMAAD ...
Cacao-Café: daaqad cusub oo ah kaabayaasha wax soo saarayaasha ...
Dhaqaalaha dijital ah: mudnaanta koowaad ee Cameroon
Fahamka sumadda bartilmaameedka
In kasta oo tiro shirkado ah ay sii kordhayaan waxay ku wada xiriiraan khadka tooska ah ama nidaamkooda dabiiciga ah, waxaa jira hadda isweydaarsiyo u oggolaanaya dadka shaqo doonka ah inay yeeshaan faham wanaagsan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee lala beegsaday, sida GoWork.fr. Xog ururin macquul ah oo fikradaha ku saabsan loo shaqeeyaha, GoWork.fr wuxuu siinayaa meel ay ku qanacdo shaqaalaha kuwaas oo khibrad wadaag u leh u oggolaanaya shaqo doonka shaqo raadinta inay wax badan ka ogaadaan shirkadaha ay ka codsanayaan gobolladooda. Faallooyinka hoos ku xusan shahaado qarsoon oo isbedel sameysa oo shirkada u muujisa si ka duwan. GoWork.fr waa kan ugu horreeya uguna wanaagsan ee ugu wanaagsan ee isku keenaya maamulka iyo shaqaalaha, ugu dambeynti awood u siineysa macluumaadka dib loogu quudiyo si loo hagaajiyo wax soo saarka iyo xaaladaha shaqada. Waxaa lagusoo bandhigayaa lix qaaradood, Xariirkani wuxuu albaabada u furi doonaa marxalad cusub nolosha shirkadda iyadoo ay ugu mahadsan tahay hanaan hufnaan leh oo ogeysiisyada shaqaalaha laga sameeyay tobanaan kun oo shirkadood oo fadhigoodu yahay Faransiiska.
Ubad wanaagsan oo diyaarsan
Kartida gobolka dhiibtay, ofOkitaan ou Bariga Weyn ka dhigaan gobollada in ay ku noolaadaan si ka duwan sidii hore, oo aan ku jirin tartanka fikradaha leh ee fikradaha laakiin ka sii badan iyada oo loo abuurayo waaya-aragnimadooda isku-duwaha macluumaadka oo suurtogal ka dhigaya in sifiican loo fahmo caqabadaha shaqada la kulmi doona. Marka nooca Fransiiska ee GoWork.fr portal wuxuu siinayaa marin u hel macluumaad muhiim ah xilliyadan qalalaasaha dhaqaale markii dhammaan rajooyinku ay gacanta ku hayaan soo kabashada tartiib tartiib ah. Ka hel fikradaada cida aad u shaqayso adiga oo ururinaaya nuxurka hawlaheeda mahadsanid nuxurka ay bixiyeen kuwa noqon doona berri. Adduunyo cusub ayaa dhabtii kuu furmaya adiga ayayna ku xidhan tahay inaad ogaato sida loo tago halkaas. Kala sooc, dooro adduunka kuugu dhow, diyaar ahow oo soco.
TELES RELAY 36735 posts 1 comments
Golaha Sare ee Magistracy: Cinwaanka buuxa ee Madaxa Gobolka
Russia: Clinton Njié ayaa si wanaagsan u bilaabanaya xilli ciyaareedkiisa
Cacao-Café: waa daaqad cusub oo lagu kabayo wax soo saarayaasha reer Cameroon
Maxay Zambiya u qarameyneysaa macdanta naxaasta ah ee Glencore - Jeune Afrique